Warshadda Solanuz waa shirkadda kaliya ee ka hawl gasha Bartamaha Aasiya oo ku takhasustay soo-saarista waxsoosaarka dhammeeya ee baradhada - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Warshaddu waxay diiradda saareysaa soo saarista shiilannada Faransiiska iyo jilicsanaanta. Awoodda naqshadeynta waa 20 kun tan oo ah alaabooyin dhammaaday sanadkiiba. Shirkaddu waxay shaqadeeda ka biloowday Maarso 2019 magaalada Tashkent.
Frieska Faransiiska ee loogu talagalay Uzbekistan maahan wax soo saar caan ah, dhaqanka isticmaalkiisa weli lama sameyn. Tashkent oo kali ah wuxuu cunaa qiyaastii 500 tan oo shiilalka Faransiiska ah bil kasta. Intaa waxaa dheer, shiilannada faransiiska iyo kuwa jilicsan ayaa leh awood wax dhoofineed oo wanaagsan: ma jiraan warshado la mid ah oo ku yaal dalalka deriska ah. Iyo shaqada muddada-dheer ee Agrover LLC, oo ah soo-saaraha ugu weyn ee baradhada ee Uzbekistan, waxay warshadda siisay tiro ku filan oo ah alaabta ceeriin oo tayo sare leh.
Bilaabidda khadadka wax soo saarka waxay qaadatay qiyaastii 4 sano. Inta lagu jiro waqtigan, qalabka Nederlandka ayaa la soo uruuriyay oo la tijaabiyey, shaqaale ayaa la tababaray, cunto karin asli ah ayaa la soo saaray. Tijaabooyinka kala duwan waxay socdeen ku dhowaad saddex sano, taas oo suurta gelisay in la doorto midka kaliya ee siinaya shiilan faransiiska ugu fiican ee 12 nooc.
Baradho jilicsan oo oval ah, oo isku mid ah sida mataanaha mataanaha ah, ayaa la dhaqaa oo uumiga ayaa la nadiifiyaa ka dib kala soocida. Dheeraad ah - jarista mashiinka iyo labalaabidda buskaha illaa kalabadh diyaar ah. Ka dib jeexitaanku wuxuu u socdaa shiilista nidaamka dufanka qotada dheer, halka ay toos uga aadaan xilliga qaboobaha, ilaa qolka qaboojinta naxdinta leh. Saliida shiidan waxay ku wareegtaa nidaamka waxayna mareysaa miirayaasha: qiyaastii 2 kg oo saliid ah ayaa loo isticmaalaa 250 tan oo baradho ah. Marka la filaayo arinta, saliida waxaa lagu sameeyaa xakameyn tayo leh mana ku jiraan walxo waxyeelo u leh caafimaadka.
Shiil faransiis ah oo la qaboojiyey--35 digrii waa la buuxiyaa, la baakadeeyay loona iibiyaa. Badeecadu waxay ku dhowdahay in la isticmaalo. Waa ku filan tahay inaad ku shiiliso daqiiqado dhowr ah mashiin qoto dheer ama weel wax lagu shiilo, iyo xaleef jilicsan oo casaan leh oo saxarka la shiiday ayaa ka buuxin doona jikadaada caraf udgoon. By the way, oo ka duwan shiilanda aan u baranay - gacmaheena lagu kariyo ama lagu cunteeyo makhaayada, alaabada Solanuz ma "jilcaan" qaboojinta ka dib, laakiin waxay isku sii yihiin dahab iyo jajab.
Ma jiraan wax ka sii badan oo ku jira jajab baradhada la shiiday. Maya "kimistari": kobciyeyaasha dhadhanka, waxyaalaha la ilaaliyo, dhir udgoon. Xitaa ma jiraan milix caadi ah, macaamilku wuxuu ku dari doonaa wax walba naftiisa, hadba sida uu u dhadhamiyo. Flakes waxaa lagu diyaariyaa iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad la mid ah. Baradhada la dhaqay oo diiray ayaa la jaray, la nadiifiyey oo gebi ahaanba la qalajiyey. Xaaladdan oo kale, jeexjeexyada ayaa lumiya dhammaan qoyaanka, ka dib markaa loo diro mashiinka, halkaas oo lagu jajabiyey budo. Ka dibna - waxaad u baahan tahay oo keliya inaad biyo ku darto.
Awoodda warshadda ayaa u oggolaaneysa ka shaqeynta illaa 170 tan oo baradho ah maalintii. Waxay sameeyaan qiyaastii 50 tan oo shiilan oo Faransiis ah iyo 13 tan oo jajab ah. Khadadka ayaa otomaatig ah sida ugu macquulsan, waxaa jira shaqaale 15 wareeg kasta. Kaqaybgalayaashu waxay raacaan laynka, kuwa wax jabsadana waxay xirxiraan alaabtii dhammaatay. Toddobaadkiiba mar, khadka oo dhan ayaa joogsada nadiifinta.
LLC "Agrover" ayaa qorsheyneysa inay u dirto ka baaraandegidda illaa 80% dhammaan baradhada koray. Warshadu waxay soo saari doontaa in ka badan kun tan oo ah alaabooyin dhammaaday bil kasta.
Tags: processing baradhoWax soo saarka shiilan ee FaransiiskaUzbekistan